Translate siya from Tagalog to Burmese - MyMemory
Results for siya translation from Tagalog to Burmese
At sinabi nila, Kinakailangan siya ng Panginoon.
သခင်အလိုရှိသည်ဟု ပြန်ပြောကြ၏။ ယေရှုထံတော်သို့ မြည်းကလေးကို ဆောင်ခဲ့၍၊
At iniwan siya ng lahat, at nagsitakas.
ကျမ်းစာပြည်စုံမည်အကြောင်းတည်းဟု ထိုလူများကို မိန့်တော်မူ၏။
ထိုဘုရားသခင်သည်ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ဘုန်းကြီးတော်မူစေ သတည်း။ အာမင်။
Sumasakaniya nawa ang paghahari magpakailan man. Siya nawa.
ထိုဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ဘုန်းအသရေ အစွမ်းသတ္တိရှိတော်မူစေသတည်း။ အာမင်။
ထိုအရပ်၌လည်း ထိုင်လျက် စောင့်နေကြ၏။
ထိုသူသည်လည်း ထ၍ မိမိအိမ်သို့ သွားလေ၏။
At isinakdal siya sa maraming bagay ng mga pangulong saserdote.
At nagutos siya at pinugutan ng ulo si Juan sa bilangguan.
လူကို စေလွှတ်၍ ယောဟန်၏လည်ပင်းကို ထောင်ထဲမှာဖြတ်စေ၏။
At binigyan nila siya ng isang putol na isdang inihaw.
ငါးကင်တပိုင်းနှင့် ပျားလပို့ကို ကပ်ပေးကြ၏။
သင်တို့အပေါင်း၌ ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း။ အာမင်။
ထိုသူအပေါင်းတို့က၊ သူ့ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားပါဟု ဟစ်ကြ၏။
At pagdaka'y itinaboy siya ng Espiritu sa ilang.
ထိုခဏခြင်းတွင် ဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှုကိုတောသို့သွားစေတော်မူ၏။
O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas?
ငါးကို တောင်းလျှင် မြွေကို ပေးမည်သူ တစုံတယောက်မျှသင်တို့တွင် ရှိသလော။
Ang Ephraim ay nalalakip sa mga diosdiosan; pabayaan siya.
Inaabatan ng masama ang matuwid, at pinagsisikapang patayin niya siya.
မတရားသောသူသည် ဖြောင့်မတ်သောသူကို ချောင်းမြောင်း၍ သတ်ခြင်းငှါ ရှာကြံတတ်၏။
သင်တို့၌ရှိသော ဝိညာဉ်ပကတိမေတ္တာကို ဧပဖြသည် ငါတို့အားပြခဲ့ပြီ။
mohon maaf lahir batin (Indonesian>Hindi)auditus sum (Latin>Italian)يعلنان (Arabic>English)mai abhi busy hu (Hindi>English)x xx ভিডিও সানিলিয়ন (Bengali>English)jesbrusaram (Latin>English)fiberduk (Swedish>English)i can't makefb friend (English>Hindi)facturés au prix net (French>English)nello specifico del cantiere (Italian>English)sovellettavan (Hungarian>Italian)non ho ricevuto il cappello (Italian>English)l'amor che move il sole el'altre stelle (Italian>English)doorwerken (Dutch>German)hydroxyoctanoate (English>Portuguese)interventionsmöglichkeiten (German>French)schuldvergelijkingsovereenkomst (Dutch>French)i like to drink water when im thirsty (English>French)binigyan mo ako (Tagalog>English)dandole (Spanish>English)hemmkörpern (German>English)kyrgyzstÃ¡nu (Czech>Estonian)je nage une fois par semaine (French>English)j ai malala tete,tuaun doliprane (French>Italian)caption (English>Tagalog)